Hadaadan Garanaynin Mawduuca Caruurta WordPress uu yahay ... | Martech Zone
Khamiista, Oktoobar 29, 2020 Khamiista, Oktoobar 29, 2020 Douglas Karr
Waxaad wax ka beddeleysaa mawduucyada WordPress si qaldan.
Waxaan la shaqeynay daraasiin macaamiil ah waxaanan dhisnay boqolaal boggag WordPress ah sanadihii la soo dhaafay. Maaha inay shaqadeenu tahay inaan abuurno bogag WordPress ah, laakiin waxaan dabeyl u qabanaa macaamiil badan. Macaamiisha uma yimaadaan inay isticmaalaan boggaga WordPress badanaa. Waxay caadi ahaan noo yimaadaan si ay uga caawiyaan hagaajinta boggooda raadinta, bulshada, iyo beddelaadda.
Badanaa maahan, waxaan marin u helnaa goobta si aan u hagaajino sheybaarada ama aan u dhisno bogag cusub oo deg deg ah, waxaanan ogaanay wax xun. Waxaan badanaaba helnaa mawduuc si wanaagsan loo qaabeeyey, si fiicanna loo taageeray oo loo iibsaday aasaas u ah goobta ka dibna si heer sare ah wax looga beddelay hay'addii hore ee macmiilka.
Tafatirka mawduuc muhiim ah waa dhaqan xun oo u baahan in la joojiyo. WordPress ayaa la horumariyay Mawduucyada Carruurta si ay wakaaladuhu u qaabeeyaan mowduuc iyagoon taaban furaha aasaasiga ah. Sida laga soo xigtay WordPress:
Mawduuca ilmuhu waa mawduuc laga dhaxlo waxqabadka iyo qaabaynta mawduuc kale, oo loo yaqaan mawduuca waalidka. Mawduucyada carruurta waa habka lagu taliyay ee wax looga beddelayo mawduuc jira.
Maaddaama mawduucyadu ay si aad ah ugu lug yeeshaan, mawduuca badanaa waa la iibiyaa oo badanaa la cusbooneysiiyaa si loo daryeelo cayayaanka ama godadka amniga. Qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha mowduucyada xitaa waxay sii wadaan inay sare u qaadaan astaamaha mawduucooda muddo ka dib ama ay ku taageeraan mawduuca cusbooneysiinta nooca WordPress. Waxaan ka soo iibsanaa inta badan mawduucyadeena Dulucda. Waxaad ka heli doontaa in mawduucyada sare ee Themeforest la iibiyo tobanaan kun oo jeer oo ay leeyihiin hay'ado naqshadeyn buuxda oo sii wadaya inay taageeraan.
Markii aan la shaqeyno macmiil, waxaan u haynaa inay dib u eegaan mawduucyada si ay u arkaan astaamaha iyo shaqooyinka ay jecel yihiin. Waxaan hubineynaa in mawduuca uu ka jawaabayo aaladaha mobilada isla markaana uu leeyahay dabacsanaan weyn oo loogu talagalay qaabeynta iyo hababka gaagaaban ee loo qaabeeyo. Ka dib waxaan ruqsad u siineynaa oo soo dejineynaa dulucda. Qaar badan oo ka mid ah mawduucyadani waxay ku yimaadaan horay-baakad leh a Mawduuca Ilmaha. Ku rakibidda labada Mawduuca Ilmaha iyo Mawduuca Waalidka, ka dibna dhaqaajinaya Mawduuca Ilmaha wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka shaqeyso Mawduuca Carruurta.
Habaynta Mawduuca Ilmaha
Mawduucyada Carruurta ayaa sida caadiga ah lagu soo diyaariyey mawduuca waalidka waxaana loogu magacdaray dulucda cunugga dushiisa. Haddii dulucdaydu tahay Avada, Mowduuca Carruurta waxaa caadi ahaan loogu magac daray Avada Child oo wuxuu ka kooban yahay avada-cunug galka Taasi maahan heshiiska magacaabista ugufiican, sidaa darteed waxaan ugu magacdaraynaa dulucda feylka file.css, magacii ayaan ugu magacdaraynaa macmiilka kadib, ka dibna ku dar shaashadda goobta ugu dambeysa, ee la habeeyay. Waxaan sidoo kale u qaabeynaa faahfaahinta xaashida qaabka si markaas macmiilku u garto cidda dhistay mustaqbalka.
Haddii a Mawduuca Ilmaha kuma jiraan, wali waad abuuri kartaa mid. Tusaalaha tani waa Mawduuca Carruurta ee aan u horumarinay hay'addayada. Waxaan ugu magac darnay dulucda DK New Media 2018 ka dib boggeena iyo sanadkii la hirgeliyay oo Mawduuca Carruurta lagu rido galka kow-sideed. Xaashida CSS waxaa lagu cusboonaysiiyay macluumaadkeena:
/ * Magaca Mawduuca: DK New Media 2018 Sharaxaad: Mawduuca ilmaha loogu talagalay DK New Media ku saleysan mawduuca Avada Qoraa: DK New Media
Qoraa URI: https://dknewmedia.com Template: Avada Version: 1.0.0 Text Domain: Avada * /
gudahood ah Mawduuca Ilmaha, waxaad arki doontaa ku tiirsanaanta mawduuca waalidka oo loo aqoonsaday inuu yahay Template.
Dib-u-habeynta CSS-ka ka baxsan, feylkii ugu horreeyay ee aan rabno inaan wax ka beddelno wuxuu ahaa hoose. Si tan loo sameeyo, waxaan ka soo guurinay faylka footer.php ee laga soo qaatay mowduuca waalidka ka dibna waxaan ku soo guurinay ka kow-sideed galka Ka dib waxaan ku saxnay faylka footer.php qaabeynteena iyo goobta loo maleynayo kuwa.
Sidee Mawduucyada Carruurtu u shaqeeyaan
Haddii uu jiro fayl ku jira Mawduuca Ilmaha iyo Mawduuca Waalidka, faylka Mawduuca Ilmuhu waa la isticmaali doonaa. Marka laga reebo waa function.php, halkaas oo koodhka labada mawduuc looga faa'iideysan doono. Mawduucyada Carruurtu waa xalka wanaagsan ee dhibaatada aadka u adag. Tafatirka feylasha mawduuca asaasiga ahi waa maya-maya mana aha inay aqbalaan macaamiisha.
Haddii aad raadineyso hay'ad si ay kuu dhisto degel WordPress ah, ka dalbo inay hirgeliyaan Mawduuca Carruurta. Haddii aysan garanayn waxaad ka hadlayso, raadso hay'ad cusub.
Mawduucyada Carruurtu waa Halis
Waxaad kiraysatay hay'ad si ay kuugu dhisto goob, waxayna ku hirgeliyeen Mawduuc Waalidka si fiican loo taageeray iyo Mawduuc Carruur si heer sare ah loo habeeyay. Ka dib markii la sii daayo goobta oo aad dhammaystirto qandaraaska, WordPress wuxuu sii daayaa cusbooneysi deg-deg ah oo hagaajiya godka amniga. Waxaad cusbooneysiineysaa WordPress oo bartaada ayaa hadda jaban ama bannaan.
Haddii wakaaladdaadu tifaftiri lahayd Mawduuca Waalidka, waad lumin laheyd Xitaa haddii aad heshay Mawduuc Waalidiin la cusbooneysiiyay, waxaad u baahan doontaa inaad soo dejiso oo aad xalliso wixii isbeddel ah ee koodhadhka ah si aad isugu daydo inaad aqoonsato saxitaanka hagaajinta arrinta. Laakiin tan iyo markii wakaaladdaadu shaqo weyn qabatay oo ay horumarisay a Mawduuca Ilmaha, waxaad kala soo baxaysaa cusbooneysiinta Mawduuca Waalidka oo ku rakib koontadaada martigelinta. Cusboonaysii bogga wax walbana way shaqeeyaan.
Shaacinta: Waxaan isticmaalayaa kan Dulucda xiriiriye ku xiran maqaalkan.
Tags: avadadulucda ilmahadulucda waalidkakudoodwordpress theme ilmahawordpress theme waalidmawduucyada erayada
Bilowga Toluna: Sirdoonka Isticmaalaha-Waqtiga-dhabta ah ee Bulsho Caalami ah